Marary ny toekarena Mitotongana hatrany ny Ariary
Tsapa tato anatin’ny iray volana izao fa tsy nitsaha-nitotongana ny sandan’ny vola Malagasy ariary raha oharina amin’ny euro.
4085,69 ariary ny 1 euro tamin’ny 20 aogositra 2019, lasa 4140,28 ariary izany nanomboka ny 20 septambra lasa teo araka ny tarehimarika nalaina tao amin’ny tranonkalan’ny Banky foiben’i Madagasikara, izany hoe nisy elanelana 54,59 ariary. Tahaka izao manaraka izao io fivoaran’ny fitotongan’ny sandan’ny ariary io tato anatin’ny andro vitsy. Ny 19 septambra, ny 1 euro mira 4128,89 ariary, ny 18 septambra 1 euro mira 4126,27 ariary, ny 17 septambra 1 euro natakalo 4108,3 ariary, ny 16 septambra 1 euro mira 4122,83 ariary ary 1 euro mira 4123,8 ariary tamin’ny 10 septambra. Tsara homarihana fa 3780, 27 ariary ny 1 euro tamin’ny 10 septambra 2018 ary 3983,00 ariary izany ny faran’ny volana septambra 2018. Ankehitriny anefa dia io efa mihoatra ny 4100 ariary io ny euro iray. Tsy misy adihevitra be fa dia mazava ny resaka betsaka ny vola mivoaka amin’ny kitapom-bolam-panjakana hanafarana sy hividianana entana avy any ivelany, mety handoavana trosa ihany koa saingy manify ny vola miditra…tena tsy ampy ny vola vahiny miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana, ny tahan’ny fampidiran-ketra moa dia anisan’ny ambany indrindra aty Afrika ny an’i Madagasikara na dia nisy aza ny ezaka efa natao noho ny firoborobon’ny sehatra tsy manara-penitra sy ny kolikoly avo lenta. Ny fanjakana izay efa tsy manam-bola anefa dia mbola manentsina ny banga ao amin’ny jirama, ary misy fotoana tsy maintsy manefa ny volan’ireo orinasan-tsolika goavana eto amintsika. Tsy mety tonga ny famatsiam-bola hahafahana tena miasa, ary karazan’ny manao sangy ratsy ihany ny mpitondra mampanantena an’izatsy sy izaroa kanefa efa tena manify ny ao am-bata. Tsy maintsy vola vahiny no hividianana solika, fanafody sy entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN) izay hafarana avy any ivelany. Inona no hitranga rehefa tsy ampy intsony ny tahiry vola vahiny eo am-pelatanan’ireo banky eto Madagasikara ? Raha hanetsika ny azy ny ao amin’ny banky foibe, ahiana ny hikorontanan’ny tsenam-bola ka vao miha hitotongana hatrany ny ariary. Tondro iray manaporofo fa tena marary ny toekarena Malagasy izao fitotongan’ny ariary izao, 8 volana nitantanana ny firenena i Andry Rajoelina saingy tsy mbola hita manangasanga izay famatsiam-bola be hanatanterahana ny programanasany ary efa tena miha sahirana amin’ny fiainana andavanandrony ny Malagasy : tsy misy ny asa, tsy misy ny vola, manampy trotraka ny tsy fandriampahalemana izay tsy hahafahan’ny olona miasa sy mamokatra araka ny tokony ho izy.